ထရိနျနငျမှာ ဖာဂူဆနျ ဘယျသူ့ဆီ အမွဲဖုနျးပွောနသေလဲဆိုတာ ဖျောကောငျလုပျသှားတဲ့ တပညျ့ရငျး ဖာဒီနနျ – Sports A2Z
ထရိနျနငျမှာ ဖာဂူဆနျ ဘယျသူ့ဆီ အမွဲဖုနျးပွောနသေလဲဆိုတာ ဖျောကောငျလုပျသှားတဲ့ တပညျ့ရငျး ဖာဒီနနျ
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျဂန်ထဝငျနညျးပွကွီး ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျဟာ အမြားထငျသလိုမြိုး အသငျးရဲ့လကေ့ငျြ့ရေးအစီအစဥျမှာ မကျြထောငျ့နီကွီးနဲ့ စောငျ့ကွညျ့ဆူဆဲနတေတျသူတယောကျမဟုတျဘဲ ထရိနျနငျမှာ အမွဲမွငျးပှဲလောငျးနတေတျသူဖွဈကွောငျး တပညျ့ဟောငျး ရီယို ဖာဒီနနျက ဖျောကောငျလုပျသှားခဲ့ပါတယျ။
ယူနိုကျတကျမှာ ဆယျစုနှဈ ၂ ခုကြျောကွာ သကျတျောရှညျနညျးပွကွီးဖွဈခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆနျဟာ သူ့နညျးပွဘဝမှာတော့ လကေ့ငျြ့ရေးအစီအစဥျတှကေို လကျထောကျနညျးပွတှနေဲ့သာ လှဲအပျထားလရှေိ့ပွီး သူကိုယျတိုငျကတော့ အသငျးသားတှရေဲ့ လုပျပုံကိုငျပုံတှကေို အပွငျဘကျကနေ ထှကျကွညျ့နလေရှေိ့ကွောငျး သိရပါတယျ။
ကစားသမားစီမံခနျ့ခှဲမှုမှာ သိပျပိုငျနိုငျတယျလို့ နာမညျကွီးတဲ့ စကော့တလနျသားကွီးရဲ့ ခွရောကို နောကျထပျယူနိုကျတကျနညျးပွတဦးက လိုကျမီဖို့လညျး မလှယျသလို သူ့အနနေဲ့ အသငျးသားတှအေပျေါမှာ ထူးခွားတဲ့ သွဇာညောငျးမှုမြိုးကို ပိုငျဆိုငျထားခဲ့သလို တဦးခငျြးစီရဲ့ လိုအပျခကျြတှကေိုလညျး စူးရှတဲ့အမွငျမြိုး ရှိနခေဲ့တာပါ။
” ဘော့ဈက မြားသောအားဖွငျ့ စကားပဲပွောပွီး ထရိနျနငျကို ပုံစံခပြေးလိုကျတယျ။ လကျထောကျနညျးပွတှကေိုပေါ့။ ပွီးတော့ ကြှနျတျောတို့ရောကျပွီဆိုရငျ သူတို့ကပဲ ဆကျညှနျကွားပေးသှားကွတယျ။ ဖာဂီက ထရိနျနငျမှာ ဝငျကိုမပါပါဘူး။ သူက အရနျခုံတနျးမှာ ထိုငျပွီး တယောကျခငျြးစီကို လိုကျကွညျ့နတေတျတယျ”
” အသငျးလိုကျကစားပုံဘယျလိုရှိလဲ? အခွအေနဘေယျလိုရှိလဲ? ကြှနျတျောတို့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြတှေ ဘယျလိုရှိနလေဲ? ဘယျလောကျပွငျးပွငျးထနျထနျလကေ့ငျြ့နလေဲ? ဒါတှကေို သူက ​စောငျ့ကွညျ့နလေရှေိ့ပါတယျ။ စကားတော့ တခှနျးမှာ ဝငျမပွောပါဘူး”
” ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘှတျကီတှဆေီကို ဖုနျးဆကျပွီး သူမွငျးပှဲလောငျးနလေို့ပါ။ ထရိနျနငျမှာဆိုရငျ သူစကားအမြားဆုံးပွောဆိုနတောက အဲဒီဘှတျကီဒိုငျနဲ့ပါ။ ​ဒါပမေယျ့ ပှဲကွီးတှေ ကစားရတော့မယျဆိုရငျတော့ ထရိနျနငျမစခငျ သူက ကြှနျတျောတို့အားလုံးကိုချေါပွီး ဒီနတေ့ော့ မငျးတို့အားလုံး ပှဲကွမျးရတော့မယျလို့ မှာလရှေိ့ပါတယျ” လို့ ဖာဒီနနျက ပွောပွသှားခဲ့တာပါ။
ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျအနနေဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျး ရှုံးပှဲကွုံခဲ့ရငျဖွဈစေ သို့မဟုတျ ဒါဘီပှဲမြိုး ကစားရတော့မယျ့အခါမြိုးတှမှော သှေးဆူပှကျတတျလရှေိ့ပွီး အသငျးကိုမောငျးနှငျတတျပမေယျ့ အသေးစိတျကိစ်စတှမှောတော့ လကျထောကျနညျးပွတှကေိုသာ အာဏာကုနျလှဲထားလရှေိ့ပွီး သူ့ဝါသနာအတိုငျး ကှငျးထဲမှာ မွငျးပှဲလောငျးနလေရှေိ့တာပါ။
မွငျးပှဲဝါသနာထုံတဲ့ ဖာဂီအနနေဲ့ ကိုယျပိုငျမွငျးတှကေိုလညျး အမွောကျအမွားပိုငျဆိုငျထားတာဖွဈပွီး ဖာဂူဆနျကို ကွီးမားတဲ့အကူအညီဖွဈစခေဲ့တဲ့ လကျထောကျနညျးပွ ကားလို့ဈ ကှီးရော့အကွောငျး ဖာဒီနနျကို မေးမွနျးခဲ့ရာမှာတော့ အခုလို ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
” ကားလို့ဈက အသငျးက မြှခွကေို ယူဆောငျပေးလာသူပါ။ ဖာဂူဆနျကိုလညျး ဝနျသကျသာစပေါတယျ။ သူက လကျတှဆေ့နျပါတယျ။ အသငျးတသငျးရဲ့ ပွောငျးလဲမှုအရှမှေ့ာ အကောငျးဆုံးနညျးပွလို့ ဆိုရမှာပေါ့။ သူရှိနစေဥျက ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ သိပျကိုရညျရှယျခကျြခိုငျမာတယျ။ ဘယျအသငျးကိုမဆို အကွောကျအလနျ့မရှိကစားနိုငျပွီး ဖွိုခနြိုငျခဲ့ပါတယျ” လို့ ဖာဒီနနျက ပွောကွားသှားခဲ့ပါသေးတယျ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ဂန္ထဝင်နည်းပြကြီး ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်ဟာ အများထင်သလိုမျိုး အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှာ မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ စောင့်ကြည့်ဆူဆဲနေတတ်သူတယောက်မဟုတ်ဘဲ ထရိန်နင်မှာ အမြဲမြင်းပွဲလောင်းနေတတ်သူဖြစ်ကြောင်း တပည့်ဟောင်း ရီယို ဖာဒီနန်က ဖော်ကောင်လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်မှာ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုကျော်ကြာ သက်တော်ရှည်နည်းပြကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆန်ဟာ သူ့နည်းပြဘဝမှာတော့ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေကို လက်ထောက်နည်းပြတွေနဲ့သာ လွှဲအပ်ထားလေ့ရှိပြီး သူကိုယ်တိုင်ကတော့ အသင်းသားတွေရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကို အပြင်ဘက်ကနေ ထွက်ကြည့်နေလေ့ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ကစားသမားစီမံခန့်ခွဲမှုမှာ သိပ်ပိုင်နိုင်တယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ စကော့တလန်သားကြီးရဲ့ ခြေရာကို နောက်ထပ်ယူနိုက်တက်နည်းပြတဦးက လိုက်မီဖို့လည်း မလွယ်သလို သူ့အနေနဲ့ အသင်းသားတွေအပေါ်မှာ ထူးခြားတဲ့ သြဇာညောင်းမှုမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သလို တဦးချင်းစီရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း စူးရှတဲ့အမြင်မျိုး ရှိနေခဲ့တာပါ။
” ဘော့စ်က များသောအားဖြင့် စကားပဲပြောပြီး ထရိန်နင်ကို ပုံစံချပေးလိုက်တယ်။ လက်ထောက်နည်းပြတွေကိုပေါ့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုရင် သူတို့ကပဲ ဆက်ညွှန်ကြားပေးသွားကြတယ်။ ဖာဂီက ထရိန်နင်မှာ ဝင်ကိုမပါပါဘူး။ သူက အရန်ခုံတန်းမှာ ထိုင်ပြီး တယောက်ချင်းစီကို လိုက်ကြည့်နေတတ်တယ်”
” အသင်းလိုက်ကစားပုံဘယ်လိုရှိလဲ? အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ ဘယ်လိုရှိနေလဲ? ဘယ်လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်နေလဲ? ဒါတွေကို သူက ​စောင့်ကြည့်နေလေ့ရှိပါတယ်။ စကားတော့ တခွန်းမှာ ဝင်မပြောပါဘူး”
” ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘွတ်ကီတွေဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး သူမြင်းပွှဲလောင်းနေလို့ပါ။ ထရိန်နင်မှာဆိုရင် သူစကားအများဆုံးပြောဆိုနေတာက အဲဒီဘွတ်ကီဒိုင်နဲ့ပါ။ ​ဒါပေမယ့် ပွဲကြီးတွေ ကစားရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ထရိန်နင်မစခင် သူက ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုခေါ်ပြီး ဒီနေ့တော့ မင်းတို့အားလုံး ပွဲကြမ်းရတော့မယ်လို့ မှာလေ့ရှိပါတယ်” လို့ ဖာဒီနန်က ပြောပြသွားခဲ့တာပါ။
ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်အနေနဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်း ရှုံးပွဲကြုံခဲ့ရင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ဒါဘီပွဲမျိုး ကစားရတော့မယ့်အခါမျိုးတွေမှာ သွေးဆူပွက်တတ်လေ့ရှိပြီး အသင်းကိုမောင်းနှင်တတ်ပေမယ့် အသေးစိတ်ကိစ္စတွေမှာတော့ လက်ထောက်နည်းပြတွေကိုသာ အာဏာကုန်လွှဲထားလေ့ရှိပြီး သူ့ဝါသနာအတိုင်း ကွင်းထဲမှာ မြင်းပွဲလောင်းနေလေ့ရှိတာပါ။
မြင်းပွဲဝါသနာထုံတဲ့ ဖာဂီအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်မြင်းတွေကိုလည်း အမြောက်အမြားပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပြီး ဖာဂူဆန်ကို ကြီးမားတဲ့အကူအညီဖြစ်စေခဲ့တဲ့ လက်ထောက်နည်းပြ ကားလို့စ် ကွီးရော့အကြောင်း ဖာဒီနန်ကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ အခုလို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
” ကားလို့စ်က အသင်းက မျှခြေကို ယူဆောင်ပေးလာသူပါ။ ဖာဂူဆန်ကိုလည်း ဝန်သက်သာစေပါတယ်။ သူက လက်တွေ့ဆန်ပါတယ်။ အသင်းတသင်းရဲ့ ပြောင်းလဲမှုအရွေ့မှာ အကောင်းဆုံးနည်းပြလို့ ဆိုရမှာပေါ့။ သူရှိနေစဉ်က ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ သိပ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ခိုင်မာတယ်။ ဘယ်အသင်းကိုမဆို အကြောက်အလန့်မရှိကစားနိုင်ပြီး ဖြိုချနိုင်ခဲ့ပါတယ်” လို့ ဖာဒီနန်က ပြောကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်။
အာတီတာနဲ့တှဲဖို့ ပရိုမိုးရှငျးဆငျးတဲ့ အျောဒီဂှါဒျအကွံကို မကျဒီဆနျ လိုကျနာမလား
ဇီးယကျရျှ တောကျပခဲ့တဲ့ ခြဲလျဆီး 2-2 စပါးဈပှဲရဲ့ မှတျမှတျရရဖွဈခဲ့တဲ့ အခကျြ7ခကျြ